Gaadiidleyda Muqdisho & Afgooye oo shaqo joojin ku dhawaaqay - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Gaadiidleyda Muqdisho & Afgooye oo shaqo joojin ku dhawaaqay
Darawalada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya inta u dhaxeysa Muqdisho & Afgooye ayaa maanta sameeyay banaanbax cabasho ah.
Wadayaasha gaadiidka ayaa ku banaanbaxay Ex Control Afgooye kadib markii ay sheegeen inay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka ka haysta wadooyinka Muqdisho & lacagaha badan ee laga qaado.
Waxa ay sheegeen dowladda Federalka inay lacago kaga qaado Ex Control, sidoo kalena Maamulka Koonfur Galbeed uu lacago kaga qaado Afgooye, balse markii ay soo galaan Muqdisho ay waayaan meel ay maraan wadooyinka oo xiran awgeed.
“Lacago badan ayaa nalaga qaadaa, waxba nagama dhibeyso balse waxaa wanaagsan in naloo furo waddooyinka Muqdisho, maantana sidaa ayuu banaabaxeena ku saabsan yahay, waxaana ku dhawaaqnay shaqo joojin.” Ayuu yiri mid ka mid ah dadkii Banaanbaxa ka qayb galaayay.
“Waxaan nahay dadka ku shaqeysta gaadiidleyda BL-ka, meel aan marno malahan, waxaan diyaar u nahay inaan shaqada joojino, meel kastaana waan ku banaanbaxeynaa, Ex Control 43 kun Shilin Soomaali ah ayaa nalooga qaadaa socod walbaa oo Afgooye aan ka nimaado, haddana meel aan ku shaqeysano malahan”ayuu yiri mid kamid ah dadka banaanbaxa dhigayay oo saxaafadda la hadlay.
Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa xiran oo gaadiidka dadweynaha loo diidayaa inay maraan, taasi oo shacabka si wayn ay kaga caroodeen.